Ukulingiswa kwe-Investment and Mechanical Manufacturing -Retool
Ingxubevange Steel Izingxenye
Izingxenye Zokwelashwa Kwaphezulu
Inkampani ye-Retool inolwazi olucishe lube yiminyaka engama-26 ekubunjweni ngokunemba.Kuzokulethela ukukhetha, ukusebenziseka kalula, nezindleko zokuncintisana.
Inkampani iRetool iphikelela entuthukweni yesayensi njengomfutho, ikhwalithi nokuthakazelelwa njengomthombo oya phambili. Kade sifuna ukuma okuhle kakhulu kwezikweletu, ikhwalithi esezingeni lomhlaba kanye nenkonzo ye-premium. Sifisa ngobuqotho ukubambisana nabangane bangaphandle nabasekhaya futhi sakha ikusasa elihle.
Singasakaza futhi sishaye izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo ngokuya ngemidwebo noma amasampula amakhasimende ahlinzekayo.ukunemba kokuphakama kuphezulu, futhi ikhwalithi izinzile.
Inkampani iRetool inguzakwethu othembekile embonini yokusakaza. Sisebenzisa lokhu kwethemba futhi sisebenzisa ulwazi lwethu ukufanisa izidingo zakho zokusakaza. Onjiniyela bethu banolwazi kuzo zonke izingxenye zomkhakha wokulingisa. Sihlala sinika okusemqoka okuphezulu ekhwalithi futhi silawula ngokuqinile zonke izinqubo zokukhiqiza ngokuya nge-ISO9001.
Isikulufa Semishini Yokugaya Inyama
Izakhi ze-Power Generator
I-Shijiazhuang Retool Stainless Steel Products Co, Ltd. esungulwe ngo-1994.Ukubuyiselwa kwezindawo zokubekisa indawo ku-Xinzhaidian Industry Area, eShijiazhuang city, ngokuhamba okulula nendawo ephakeme. Inkampani iRetool igxile ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwazo zonke izinhlobo ze-valve kanye nokukhiqizwa kwezingxenye zokutshala imali kanye nezingxenye zemishini.